Ergaa Qulqulluu Paatriyaarkii – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Ergaa Qulqulluu Paatriyaarkii
October 22, 2019 /in Uncategorized /by EOTC Afaan Oromo
Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen.
Eebbifamoo Abbaa Yaareed itti gaafatamaa Mana Lubummaa Ol’aanaa fi phaaphaasii kutaa lallabaa Arsii
Eebbifamoo abbaa Yooseef barreessaa Qulqulluu Sinoodoos fi phaaphaasii kutaa lallabaa Goojjaam Bahaa
Eebbifamoota miseensota Qulqulluu Sinoodoos kan taatan phaaphaasonni
Kabajamtoota itti gaafatamtoota hoggansoota fi jaarmiyaalee waajjira ol’aanaa teessoo paatriyaarkii
Itti gaafatamtoota fi bakka buutota kutaalee lallabaa
Itti gaafatamtoota Kawaalota fi Manneen Kiristaana Finfinnee
Hirmaattotni yaa’ii kanaa kutaalee addunyaa adda addaa irraa dhuftan
Walumaa galatti kabajamtootni yaa’ii walii gala fi idila addunyaa kanarratti hirmaachuuf kabajaan argamtan
Waqoyyo Gooftaan Kennaa arjummaa Isaa hin shallagamneen hojii ergama Duuka Bu’ummaa keenya isa darbe eebbisaa fi Qulqulleessee yaa’ii walii gala bara haaraa kanaan waan nugeesseef galanni Isaaf haa ta’u.
<<አድኅነነ እግዚኦ አምላክነ፤
ከመ ንግነይ ለስምከ ቅዱስ፤
ወከመ ንትመካሕ በስብሐቲከ፤
Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya nufayyisi. Maqaa Kee Qulqulluu akka galateessinuuf; galata Kees abdii akka godhannu uummata biyya ormaa keessaa walitti nuqabi.>> (Faar. 105:47)
Mootii fi Raajaa saba Israa’eel kan ture Qulqulluu Daawiit jecha Faaruu kanaa olitti caqasame Waaqayyoof yeroo dhiheessu, galmi isaa inni guddaan Waaqayyo galateessuu akka ta’e ni hubanna. Jechicha keessa akkuma ibsametti, kadhannaan mootichaa uummata isaa uummata biyya ormaa keessaa akka walitti sassaabu fi Fayyisu Gooftaa Isaa Waaqayyoon kadhata.
Sababa kadhannaa kana dhiheesseef yeroo ibsu, uummanni tokkummaan Waaqayyo akka galateessu fi galata dhiheessan sanaaniis abdii akka horatan barbaaduurraa kan ka’e akka ta’e ibseera.
Haalli isaas uummataaf miira quuqamaa hammanaa qabaachuun hogganaa uummataa tokkorraa akka eeggamu yaadni ijoon isaa ni mul’isa.
Duraan dursee garuu, galata galchuufis Waaqeeffachuuf nageenyi uummataa akka barbaachisu; nageenya qafa osoo hin ta’in gar-tokkotti walitti qabamuun waan dursi itti kennamu akka ta’e Waaqayyoof akka garaa Isaa kan ta’e Qulqulluun Daawiit osoos hin ibsin hin dabarre. Dhugaa dha, bakka nageenyi uummataa hin eeggamnetti, qalbii tokkoon walitti qabamee jaalalaan fi tokkummaan yoo hin argamin; sirni galateeffannaas ta’e Waaqeeffachuun haalaan adeemsifamuu hin danda’u. Qulqulluun Daawiit barbaachisummaan waan kanaa Afuura Qulqulluudhaan waan galeefi dha “Uummata biyya ormaa keessaa nusassaabi/walitti nuqabi; nufayyisis. Sanaan boodaas maqaa Kee ni galateessina. Maqaa Keetiinis abdii horanna” jechaa kan Kadhate.
Qulqulluu Daawiit uummata Israa’eel inni bulchu fi hogganuu sanaaf Kadhachuu qofa osoo hin ta’in, isaaniif beenyaa ta’ee hanga du’aatti wareegama ta’uuf “ምንተ ገብሩ እሉ አባግዕ ዘአነ ኖላዊሆሙ ዳዕሙ ለትረድ እዴከ ላዕሌየ ወላዕለ ቤተ አቡየ፡፡ Tiksee isaanii kanan ta’e hoolonni kun maal godhan? Harki Kee anarra fi mana abbaa koorra haa taatu malee.” jechuudhaan mootii Waaqa Isaa kan Kadhate akka ta’es Kitaabni Qulqulluu dhugaa nuuf baha.
Kabajamtoota irmaattota yaa’ii kanaa
Quuqamni fi ga’uumsi Qulqulluu Daawiit hamma warwwgamummaatti isa geessu kun dhala namaa hundumaaf; keessattuu hoggantoota Mana Kiristaanaaf gar-malee barbaachisa. Uummanni Qulqulluu Daawiitiin hogganaman kanaaf walitti qabamuun fi Fayyuun akkuma isaaniif barbaachise; har’as uummata walitti qabamuu, tokko ta’uu fi Fayyuu qabu baay’ee qabna. Uummanni nuyi hogganaa jirru kun maqaa Isaatiin akka amananiif fi maqaa Isaa akka galateessaniif Fayyina isaaniif hundi keenya Waaqayyootti ol Kadhachuufi qabna. Tokkummaan akka walitti qabamaniif illee barsiisuu, gorsuu, walitti araarsuu fi akka wal-ta’an gochuu qabna.
Manni Kiristaanaa Qulqulleettiin nageenya uummata bala’aaf Kadhachuu, barsiisuu fi gorsuun ergama ol’aanaa Waaqayyoo irraa fudhatte ta’uu isaa irraa kan ka’e dalaga ishee adda durummaan dalgdu ta’us; keessattuu tibba amma keessa jirru kanatti daran kadhannaan, barsiisuun fi gorsuun yeroo itti jabaachuu qabdu akka ta’e ni hubanna. Biyyi keenya har’a abdii fi sodaa giddutti itti argamtu fi caasaan giddu gala Mana Kiristaanaa keenyaas yeroo qormaanni gareewwan adda addaadhaan itti raafamaa jirtu dha. Tibba rakkisaa kanatti Manni Kiristaana keenya tooftaa fi ogummaa obsaan deeggarame fayyadamtee ijoollee ishee gara tokkotti walitti qabdee hojii hundaa’ol ta’e gootee fudhachuun isheerraa eeggama.
Eebbifamoota phaaohaasota, kabajamtoota hirmaattota yaa’ii kanaa; Mana Kiristaana keenyaaf Kennaa namoota walitti bu’an wal-araarsuu, barsiisuu, gorsuu fi walitti qabuu kan raawwattu isa tokko ofitti qabuun kaan immoo ofirraa qabuun, isa tokko deeggaruun isa kaan immoo busheessuun osoo hin ta’in, hundumtuu ijoollee ishee waan ta’aniif wal-qixxummaan, tokkummaan, jaalalaan fi bilisa ta’uudhaan ta’uu akka qabu dagatamuu hin qabu.
Manni Kiristaanaa keenya Qulqulleettiin wantoota siyaasawaa irraa bilisa taatee hojii ishee akka itti fuuftu gochuun gahee hunduma keenyaa, jechuunis; hoggantoota Mana Kiristaanaa, tajaajiltootaa fi qacaramtootaati. Ta’us, sagalee Waaqayyoo bu’uura godhattee waa’ee nageenya fi wal-qixxummaa dhala namaa akkasumas nagaa fi tokkummaa bal’inaan barsiisuu akka qabdu irraanfachuu hin qabnu. Miirri walii galtee dhabiinsi biyya keenya keessattui mul’achaa jiru kun sababoota lamaan akka ta’e ni mul’ata. Kunis, gama tokkoon sodaa wal-qoqqoodiinsaa kan ittisu yeroo ta’u, gama biraatin immoo soda dhabiinsa walqixxummaa ittisuu ta hubatama. Sodaa kochoowwan lamaanii yaadachuun maaliif barbaachise jechuu baannuus; akka waan sodaa qoricha hin qabnetti hammana wal-shakkuun fi walirraa fagaachuun waan barbaachisu ta’ee hin mul’atu.
Sababni isaas, qorichi furaan sodaa kanaa namni hundumtuu akkuma irratti amanu; wal-qixxummaa tokkummaa waliin; tokkummaas wal-qixxummaa waliin wal-simsiisuun qabachuu akka ta’e kan wal-mormisiisu waan hin taaneefi. Lammiileen Itiyoophiyaas kana dagachuu hin qaban. Uummannis kana irratti bal’inaan yaaduutu irraa eeggama
Kabajamtootni hirmaattonni yaa’ichaa
Kaayyoon Yaa’ii Lallabaa luboota, amantoota fi dargaggoota caasaa seeraa tokkoon gurmeessee amantaa barsiisuu, babal’isuu fi eegsisuu akkasumas qabeenya fi karra Mana Kiristaanaa bulchiinsa giddu galaa Qulqulluu Sinoodoosiin seera fi qajeelfamaan too’achaa dhimma Mana Kiristaanaaf oolchuu dha. kanaan ala eessayyuu yoomiyyuu haa ta’u; caasaa Mana Kiristaanaa eegee karri fi qabeenyi maqaa isheetiin walitti qabamu hundi hojimaata beekkamtii fi eegumsa ishee jala oolee hojiirra hin oolle hidda isaa dheereeffachaa yoo deeme, tokkummaan Mana Kiristaanaa qormaata keessa bu’uun isaa waanuma hin oolle dha.
Miirri saamicha qabeenya Mana Kiristaanaa yeroo ammaa kanatti Mana Kiristaanaa keenya keessatti babal’achaa jiru inni tokko isa kaan dhalaa deemee har’a mana lubummaa keenya dhaabna hamma jedhamutti gaheera.
Sababni gaaffiin kun ka’uu danda’eef, Dhugumaan Manni Kiristaanaan Itiyoophiyaa keessatti bakka isheen waajjira Mana Lubummaa itti hin dhaabne jiraateetii? Ijoolleen ishee Kiristaanoonni afaan dhalootaa isaaniin akka hin baranne dhoowwatteetii? Dhoowwachuu dhiisnee, kitaabicha hiiktee fi maxxansitee raabsuu dhiisteettii? Kun hundi gonkumaa dhara.
Haa ta’u malee, haqni kanaan duuba jiru garuu adda. Ilaalcha faayinaansii giddu galaa Mana Kiristaanaarraa ala gareewwan maqaa Mana Kiristaanaatiin human horatan jiraachuun isaanii waan beekkamuuf; nuyis haaluma wal-fakkaatuun mana lubummaa adda ta’e hundeessinee qabeenya haa horannu dha gaaffiin isaa. Yaaliin kun diinagdee Mana Kiristaanaa kan laamsheessu fi tokkumma ishees rakkoo keessa buusuuf kan yaalu waan ta’eef, garri hundumtuu ‘keenya’ waan jedhu dhiisee hawwii qajeelaa ‘Mana Kiristaanaa keenyaaf’ yaad-rimee jedhu haa qabaatu. Hundumtuu casaa giddu galaa Mana Kiristaanaa tokkittii jala hammatamuun gaaffii isaanii karaa heera fi seera qabeessa ta’een dhiheessuu ni danda’u. Gaaffiin ilaalcha gaarii irraa madde, Mana Kiristaanaa kan fayyadu, heera fi seera kan eege fi caasaa isaa kan eeggate amantootni keenya qabaannaan abbootni Mana Kiristaanaa sababa isaan hin keessummeessineef hin qaban.
Kanaan ala garuu, wal-taajjabsiisuun alatti yeroo dheeraa fudhachuu danda’a malee galmaan hin gahu. Qulqulluu Sinoodoosis akkuma Waaqayyo Mooticha Daawiit irra bulee dubbate uummaticha walitti qabuufi malee jechoota nama burjaajeessaniin uummata isaa gareen qooduudhaan akka ijaaruuf hin uumamne waan ta’eef, dogongorri seenaa fi amantaa akka uumamne of-eeguutu nurraa eegama. Ergamni fi kaayyoon yaa’ii lallabaas miilkaa’uu kan danda’u, qabeenyi fi maallaqni maqaa Mana Kiristaanaatiin sassaabamu kamiyyuu hojimaata Manni Kiristaanaa mirkaneessiteen fi beekkamtii itti kenniteen akkasumas bifa hojimaata Afuuraawaa fi hawaasummaa; amantaawaa fi haala seera fi heera isaa eegeen; diinagdee fi bulchiinsaadhaan malee, qabeenya Mana Kiristaanaa saamuuf hawwuu irraa kan ka’e gareewwan yeroo fi bakka adda addaatti hundeeffamaniin lallaba ‘isiniif beekna’ jedhuun miti. Kanaafuu, yaa’iin ijoon kun yaada kana xiyyeeffannaa guddaadhaan akka ilaaluuf ergaa abbaa dabarsina.
Yaa’iin walii-galaa fi ijoon kun tokkummaa Mana Kiristaanaa keenya kan eegsisu, bulchiinsa guddugalaa qabeenya fi maallaqaa ishee kan eegsisu dha waan ta’eef, yaa’ii ijoo fi ol’aanaa nageenyi fi misoomni biyya keenyaa, walqixxummaa fi tokkummaan uummata keenyaa akkasumas, tokkummaa fi qabeenya fi maallaqa isheetiin fayyadamuu Mana Kiristaanaa keenyaa ittiin ragga’uu kan danda’u akkuma ta’e, gochoota kana gad-fageenyaan ilaaluun fi seera eegsisuun bara bajataa kanatti cimee akka hojjetamu yaadachiisaa, ergaa Abbaa ni dabarsina. Yaa’iin Afuuraa walii galaa kan lallabaa idila addunyaa kunis banamuu isaa ibsuu barbaanna. Yaa’ii gaarii, Qulquluu fi eebbifamaa nuuf haa ta’u.
Waaqayyo Itiyoophiyaa fi uummata ishee haa eebbisu.
Waaqayyoof galatni haa ta’u.
Abbaa Maatiyaas dursaa Paatriyaarkii
Duree Phaaphaasota Itiyoophiyaa
Phaaphaasii Akusim Muudamaa (ዕጨጌ) teessoo Takla Haaymaanoot
Bara Araaraa (B.A.) Onkololeessa 5/2012
Maddi:- EOTC Broadcasting Service Agency/
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-10-22 11:14:392019-10-22 12:47:39Ergaa Qulqulluu Paatriyaarkii
Aduun Sambata guddaa (Dilbatni) guyyaa soomaa ta’uu isaa isin beeksisna.
Waaqayyo haa sodaannu; uummanni Waaqayyo hin sodaanne akka saba Sanaa’oor biyya lafaa irraa dhabama.
“…ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ። እስመ ርዕያ አዕይንትየ አድኅኖተከ ዘአስተዳለውከ ቅድመ ኵሉ ሕዝብከ። Yaa Gooftaa koo Fayyina Ati Uummata Kee duratti raawwatte ijji koo argeera waan ta’eef, akkuma waadaa galteen garbicha Kee amma nagegeessi” Luuq. 2:29-30
Wareegamummaan akka itti fufu waan taasistaniif galatoomaa!
Sinkisaara Muddee 7
Sinkisaara Muddee 6
Amantaa, Ayyaana fi aadaa isaa addunyaaf beeksisuuf lammiin Itiyoophiyaa hundumtuu gahee isaa akka bahu waamichi dhihaate!
Ayyaanni cuuphaa hambaa Afuuraa ta’uun UNESCO irratti galmaa’e!
Haasawa sirna baniinsaa walgahii walii galaa Yaa’ii lallabaa Sagantaan sirna Kadhannaa Yaa’ii Qulqulluu Siinoodoos amma eegaleera.